In kabadan 100 Ruux oo Dhimasho iyo Dhaawac ku noqday Dab ka kacay Suuq ku yaala Ruushka.
Monday March 26, 2018 - 09:35:44 in Wararka by Super Admin
16 Askari oo dhimasho iyo dhaawac ku Noqday Qaraxii Iskoola Boliisiyo.
Ciidamo Itoobiyaan ah oo lagu qarxiyay degmada Bardaale iyo Sarkaal ku dhaawacmay Qansaxdheere.
Dab Khasaara Hantiyadeed geystay oo ka kacay degmada Guriceel.
Korneel Ciidan Oo Kismaayo lagu dhaawacay iyo Askari lagu dilay Qansaxdheere.
Taliyihii Ciidamada ilaalada Madaxtooyada oo toogasho lagu dhaawacay.
Ruux Filasdiin ah oo si yaab leh 2 Qof Yahuud ah ugu dilay Daanta galbeed.